डिजेल कार भन्दा पेट्रोल रोज्नुको कारण - Victor Mochere
पेट्रोल वा डिजेल बहसले दशकौंदेखि चालकहरूलाई उत्साहित र भ्रमित पारेको छ - र बढ्दो वायु गुणस्तर चिन्ताहरूले थोरै मद्दत गरेको छ। यद्यपि, डिजेल मर्नबाट टाढा छ र केही अवस्थाहरूमा अझै पनि केही ड्राइभरहरूको लागि व्यावहारिक कारकहरूको संख्यामा निर्भर गर्दछ - व्यक्तिगत प्राथमिकता मात्र होइन। हाम्रो गहन गाइड दुबै इन्जिनको कार्यसम्पादन र ड्राइभिङ शैलीको जाँच गर्दछ, साथै तिनीहरूसँग सम्बन्धित धेरै लागत र वातावरणीय कारकहरू तपाईंलाई सही छनौट गर्न मद्दत गर्न।
यी हुन् डिजेल कार भन्दा पेट्रोल रोज्नु पर्ने कारणहरु
1. पेट्रोल कार सस्तो छ
2. पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा लगभग कुनै भिन्नता छैन
3. पेट्रोल सजिलै CNG मा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ
4. पेट्रोल इन्जिन मर्मत गर्न सस्तो छ
5. डिजेल इन्जिनहरू वातावरणको लागि हानिकारक छन्
6. डिजेल इन्जिनहरू शोरमा छन्
7. पेट्रोल इन्जिन अधिक शक्तिशाली छन्
8. पेट्रोल इन्जिन अधिक उत्तरदायी छन्
डिजेल भन्दा पेट्रोल कार किन्न सस्तो छ। नयाँ डिजेल कारको मूल्य एक टन छ जसमा कर लगाइएको छ। तिनीहरूसँग पेट्रोल कारको तुलनामा प्रति वर्ष खराब अवमूल्यन पनि छ। मूल्यह्रास भन्नाले कारको मूल्य घट्ने दर हो यदि तपाईंले यसलाई प्रयोग गरिएको कारको रूपमा बेच्नुभयो भने। साथै, यो पनि नबिर्सनुहोस् कि पेट्रोल कारहरू डिजेल कारहरूको तुलनामा सर्भिस गर्न सस्तो छन्।
पहिले जनताले महँगो डिजेलको गाडी किन्ने गर्दथे र पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा फरक देखिएपछि एक वर्षमा खर्च भएको सबै पैसा फिर्ता गरी पेट्रोल मालिकले भन्दा कम खर्च गर्ने गर्दथे । तर अब यो परिवर्तन भएको छ। सबैभन्दा पहिले, हामीले पहिले नै डिजेल कारहरूमा बढेको करको कारणले कभर गरिसकेका छौं तिनीहरू पेट्रोल कारको तुलनामा साँच्चै महँगो छन् र अझ धेरै इन्धन मूल्यहरू लगभग समान छन्।
यदि तपाइँ आफ्नो पेट्रोल कारलाई CNG मा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने तपाइँ भाग्यमा हुनुहुन्छ किनभने यसले त्यसो गर्न आवश्यक धेरै परिमार्जनहरू लिने छैन। तर, डिजेल इन्जिनलाई CNG मा रूपान्तरण गर्न इन्जिनमा धेरै परिमार्जन गर्न आवश्यक छ र पेट्रोल इन्जिनको तुलनामा धेरै महँगो छ।
मेसिनहरू अपरिहार्य रूपमा असफल हुने छन् र जब तिनीहरूले डिजेल इन्जिन भन्दा पेट्रोल इन्जिन राख्नु राम्रो गर्छ किनभने तिनीहरू मर्मत गर्न सस्तो हुन्छन्। तर यहाँ ठूलो छ। डिजेल इन्जिनहरू निकै बलियो हुन्छन् र प्रायः पेट्रोल इन्जिनभन्दा लामो समयसम्म काम गर्छन् तर डिजेल इन्जिनका केही भागहरू असफल भएमा श्रम लागत र पार्टको उपलब्धता दुवैको कारण मर्मत गर्न साँच्चै महँगो हुन्छ। यो भन्न सकिन्छ कि यो पेट्रोलसँग लगभग समान छ किनभने तिनीहरू कम फेल हुन्छन् तर जब तिनीहरू असफल हुन्छन् तिनीहरूको लागत बढी हुन्छ।
यी इन्जिनहरूले कालिलो जस्ता उत्सर्जनहरू उत्पादन गर्छन् जुन वातावरणको लागि राम्रो होइन। तिनीहरूले कम हरितगृह ग्यासहरू उत्पादन गर्छन् तर NOx जस्ता चीजहरू CO2 भन्दा वातावरणको लागि बढी हानिकारक छन्। अर्कोतर्फ पेट्रोलले कम वायु प्रदूषित कणहरू उत्पादन गर्दछ।
कम्तिमा भन्नुपर्दा, डिजेलबाट चल्ने कारमा ड्राइभिङ कष्टप्रद छ। तिनीहरूको उच्च कम्प्रेसन अनुपातको कारण, तिनीहरूले इग्निशन कक्षमा ठूलो 'बूम' बनाउँछन् र ध्वनि प्रदूषण स्रोतहरूको पहिले नै बढ्दो सूचीमा थप्छन्। यो धेरै नदेखिन सक्छ तर ध्वनि प्रदूषणले उच्च रक्तचाप, हृदय रोग र तनाव जस्ता गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ।
यो अलि अस्पष्ट हुन्छ। डिजेल इन्जिनहरू ठ्याक्कै गतिको लागि बनाइएका छैनन्। तिनीहरूसँग सुरुमा छोटो फटमा उच्च टर्क हुन्छ जसले तिनीहरूलाई राम्रो त्वरण दिन्छ। अर्कोतर्फ, पेट्रोल इन्जिनहरूको शक्ति इन्जिनको रिभ्समा निर्भर हुन्छ जसले तिनीहरूलाई डिजेलको तुलनामा फराकिलो स्तरमा पावर दिन्छ जसले गर्दा उनीहरूलाई थप RPM, अश्वशक्ति र ०-१०० किमी/घन्टा छिटो समय दिन्छ।
डिजेल इन्जिनको तुलनामा पेट्रोल इन्जिनले राम्रो पावर डेलिभरी भएको कारणले राम्रो थ्रोटल प्रतिक्रिया दिन्छ। यसले पेट्रोल इन्जिनलाई ड्राइभ गर्न पिप्पी महसुस गराउँछ जबकि डिजेल अलि सुस्त महसुस गर्दछ।
यी हुन् तपाईंको अर्को कार पेट्रोलबाट चल्ने कारणहरू। डिजेल भन्दा पेट्रोल छनोट गरेर तपाई आफैं र वातावरण दुवैको पक्षमा हुनुहुनेछ।